Isbadel aan caadi ahayn oo maanta laga dareemayo waddooyinka Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Isbadel aan caadi ahayn oo maanta laga dareemayo waddooyinka Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa maanta is-badel aan caadi ahayn laga dareemayaa waddooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka ay sida weyn u isticmaalaan shacabka magaalada ku nool, kuwaas oo lagu jaray carro badan iyo dhagxaan waaweyn.
Arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Madaale uu shaaciyay in magaalada la gelin doonno bandow laba maalmood socon doonno, xilliga lagu guddo jiro doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Ciidamo badan oo isugu jira nabad-sugidda qaranka iyo booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu arkayaa waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, waxaana gebi ahaan la joojiyay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Sababta ugu weyn ee loo xiray wadooyinkaas ayaa la sheegayaa inay tahay iyadoo maalinta Arbacada soo socoto la qorsheeynayo in magaalada Muqdisho lagu qabto doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Illaa 23 musharax ayaa la qorsheeynayaa inay ku tartamaan doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, iyadoona ay durbadiiba soo baxayaan warar sheegaya in qaar ka mid ah musharixiintaasi ay ka tanaasuli rabaan tartanka doorasho.